Kenya iyo Somaaliya oo lagu baaqay inay xaliyaan muranka dhanka badda – Radio Daljir
Kenya iyo Somaaliya oo lagu baaqay inay xaliyaan muranka dhanka badda
Maajo 27, 2019 4:03 b 0
Wargeyska The Nation ee ka soo baxa Nairobi waxa maanta lagu soo daabacay Maqaal Aragtiyeed uu qoray Professor Peter Kagwanja oo ahaa La-taliyihii hore ee Dowladda Kenya, haatan ka tirsan Machadka Siyaasadda Afrika ee Kenya, kaasi oo uu kaga hadlay Muranka xuduud-baddeedka iyo Khilaafka Diplomaasiyadeed ee u dhexeeya Somalia iyo Kenya.
Qoraaga waxa uu hordhaca Maqaalkiisa kaga hadlay in Muranka xuduud-baddeedka tahay cabsida ugu cusub ee khatarta Deganaanshaha iyo dib-u-soo-kabashadda Somalia iyo Nabadda Geeska Afrika.
Xiisadda ayaana sare u kaci doonta, iyadoo foodda nagu soo hayso Xukunka murankaasi oo la filayo inuu jadwalka Maxkamadda Garsoorka Caalamka ee ICJ qabsoonto bisha September ee sannadkan 2019-ka.
Dowladda Kenya waxay ku eedeynaysaa Villa Somalia sii-socoshadda muranka xuduud-baddeedka, iyadoo la og yahay inay Kenya bishan May 21-dii xanibaadii 3 Saraakiil sarsare oo ka tirsan Dowladda Somalia, kuwaasi oo lagu celiyey Garoonka Joomo Kenyatta ee Nairobi, loona diiday inay ka qeyb galaan Kulankii ay EU-da maalgelisay ee looga hadlay Barnaamijka Maraaynta Colaadaha ka soo gudba xuduudka dalalka Somalia, Kenya iyo Ethiopia.
Xiisadda Diplomaasiyadeed ee labada Waddan ayaan la filayaa inay cirka isku shareerto bilaha soo socoda.
La-taliyihii hore ee Dowladda Kenya, Professor Peter Kagwanja waxa uu tilmaamay inay Dowladda Kenya qorsheynayso inay ka baxaan Xuquuqihii Khaaska ee la siiyey Saraakiisha sarsare ee Somalia, cadaadis adag oo lagu soo rogayo Duullimaadyada Diyaraadaha Somalia iyo inay Dowladda Kenya xiriir dhow la yeelato Maamul-gobaleedyadda xubnaha ka ah DFS iyo in si xeelladaysan Ciiddanka Kenya looga soo daad-gureeyo Deegaanadda ay ka joogaan gudaha Somalia.
Sheeko Gaaban: Guuldarro Jacayl god ma loo galaa! (Taxanaha 39aad – maqal & muuqaal)